Iyo ECG yeApple Watch inogona kushandiswa muSpain nekushandura dunhu | IPhone nhau
Nacho Aragonés | | dzakawanda
Iyo nyowani Apple Watch yakateedzana 4, yakapihwa mwedzi mishoma yapfuura, inosanganisira iyo Hardware inodiwa kuita electrocardiogram yemushandisi. Panguva ino, ingangoitika isingawanikwe, kunyangwe hazvo iyo Apple Watch inokwanisa kuzviita.
Uku kuremerwa kuri kukonzerwa nenyaya yekuti, isati yashandiswa, inofanirwa kunge iine mwenje wakasvibira wezviremera zvehutano zvinoenderana. Panyaya yeUnited States, iyo FDA yakatopa kubvumidzwa kwayo uye, pakupera kwegore, Apple inotarisira kuzokwanisa kumisikidza sarudzo, kuburikidza nekuvandudza, kune vashandisi muUnited States.
Idzi inhau dzakanaka. Izvo zvekuti Apple Watch yatove nezvose zvaunoda kuti uite electrocardiogram, kunyangwe iya inotengeswa kunze kweUnited States, Zvinoita kuti tifunge kuti sekubvumidzwa kunowanikwa kubva kuzviremera zvakasiyana zvakaita seEMA muEuropean Union kana maAemps kuSpain, sarudzo inogona kumisikidzwa neyekugadziridzwa kwesoftware.
Izvi hazvina kuitika, semuenzaniso, neApple Watch nhepfenyuro 3 ine LTE yekubatanidza. Munyika dzisingatsigirwe, Ivo havana kutengeswa, zvaireva kuti kunyangwe kana kambani ikatsigira Apple eSIMs, isu tinogona kuishandisa. (Iye zvino tine Apple Watch nhepfenyuro 4 LTE uye makambani anoitsigira).
Uyewo, pane mukana mukuru wekushandisa EKG mune chero nyika nekuti iri kushanda muUnited States. Kunge akawanda maapplication uye masevhisi seApple News, Apple Bhadhara Cash, nezvimwe. izvo zvinoonekwa kana uchichinja dunhu kana kufambisa zvishandiso kune imwe nharaunda uko kana zviripo, tinogona kufunga, sezvakataurwa ne9to5Mac, Kana tikashandura dunhu - kwete mutauro - weApple Watch yedu kuUnited States, tichafadzwa neECG chero kwatiri.
Rangarira kuti iwe unofanirwa kushandura dunhu iri Zvirongwa -> General -> Mutauro uye dunhu uye sarudza United States kunakidzwa neiyi kana yagadziriswa ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo ECG yeApple Watch inogona kushandiswa muSpain nekushandura dunhu